आवरण कथाले ध्यान तान्यो - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
साप्ताहिक उत्कृष्ट छ । म यसको नियमित पाठक हुँ । साप्ताहिकलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनुहोला ।
- खेमु सुवेदी
साप्ताहिकको आवरण कथाले मेरो ध्यान तान्यो (फ्रन्टपेज : नेपालमा के गरे रामरहिमले) । रामरहिमले नेपाल आएर के गरे भन्ने कुरा घतलाग्दो रहेछ । यस्तो महत्वपूर्ण सूचनाका लागि धन्यवाद साप्ताहिक ।
कवयित्री तोया गुरुङका बारेमा धेरै पछि पढ्न पाइयो (यात्रा सन्दर्भ : तोया : समय–समयको कुरा) । मानिसहरू गुमनाम हुुनुमा मिडियाकै हात छ । अहिले चर्चामा रहेका पात्रहरू बढी खोजिन्छ । पुराना स्रष्टाहरू ओझेल पर्दै गएका छन् । बेला–बेलामा उनीहरूलाई पनि ठाउँ दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
- सुमन गुरुङ
अनिताजी, समाजसेवालाई निरन्तरता दिनुहोला (अन्तरवार्ता : लिगेसी मात्र सबै कुरा होइन) । तराई–पहाड जोड्ने काममा इँटा बन्ने प्रयास गर्नुहोस् । आममानिसले तपाईंबाट यही अपेक्षा गरेका छन् ।
ढिलै भए पनि आन्दोलनरत दलहरू चुनावमा सामेल हुनु सुखद कुरा हो (स्थानीय तह निर्वाचन : वीरगन्जको चहलपहल) । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न होस् ।
- प्रदीप मजगैंयाँ
अन्य प्रतियोगिता भन्दा फरक लाग्यो (हेरिटेज क्विन नेपाल) । यस्तै फरक सन्देश बोकेका प्रतियोगिता आयोजित हुनु जरुरी छ ।
- खगेन्द्र कार्की
जनताका लागि काम गर्ने नेता चाहियो (रौतहटमा कसले मार्ला बाजी ?) । जसले जिते पनि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखून् । विकास निमार्णमा ध्यान दिऊन् ।
- भरत मल्ल
चर्चित गीतहरूको पृष्ठभूमि जान्न पाइन्छ (चर्चामा : यसरी फुर्छ कर्णप्रिय गीत) । प्राय: मिडियामा यस्ता स्टोरी कमै पढ्न पाइन्थ्यो । यसपालि साप्ताहिकमा पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो ।
- जुनु आचार्य
नायक राजेश हमाल राहत लिएर तराई पुगेको समाचारले खुसी तुल्यायो (फिल्मी डायरी : राहत बाँड्दै हमाल) । विपद्का बेला पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन जरुरी थियो ।
- अनिता ढकाल
चलचित्र नालापानीका लागि अग्रिम बधाई ! (बन्ने भो नालापानी) बिर्संदै गएको इतिहास चलचित्रका माध्यमबाट बुझाउने प्रयत्न हुन लागेकोमा खुसी लाग्यो ।
- दिलीप सापकोटा
हो, मानिसको मन हजारौं याद र गुनासाहरूले भरिएको हुन्छ (मुक्त आकाश : यो झरीमा तिमीसँगै) । जिन्दगीमा कतै न कतै चुकिएकै हुन्छ । नत्र त जीवन अर्कै हुन्थ्यो नि † मानिस बाँच्ने भनेकै यादहरूको सहाराले त हो ।
- हेम थापा
अचम्मका तस्बिर हेर्न पाइयो (तस्बिर बोल्छ : मोटा कुस्तीबाज) । सुमो आफैंमा अनौठो प्रतियोगिता हो ।
नेपालले नै जितेको हेर्न मन थियो (नेपालभन्दा अगाडि भारत) । अर्को पटक नेपालले यो हारको बदला लिन सकोस् ।
- हितेश खड्का
यी टिप्स उपयोगी लागे (योग र जीवन : मानसिक तनावमा योग) । घरमै बसेर पनि योग गर्न सकिन्छ । यसले पैसा र समय दुवैको बचत गर्छ । साप्ताहिकमा यस्तै टिप्सहरू पढ्न पाइयोस् ।
- भक्त लामा
अमृता र विक्रमजी दुवैलाई शुभकामना छ (अमृता र विक्रमलाई मोडल हन्ट) । बाहिरी मात्र होइन, बौद्धिक सुन्दरतामा पनि ध्यान पुर्‍याउनुहोला ।
- तिलक शाह
नेपालीहरू जहाँ भए पनि आफ्नो कला–संस्कृतिलाई माया गर्छन् (हङकङमा तयामा खियामा) । जातजाति एवं भाषालाई सम्मान गर्छन् । यो सुखद पक्ष हो । संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि हामीले आफ्नो पहिचान तथा संस्कृति बिर्सनु हुँदैन ।
- अन्जान घिमिरे
रोल्वालिङको विपन्न शेर्पा परिवारको कथाले मन छोयो